Bressert Technology Trading Technology - Bot - Ngwongwo ahia nke onwe - Ngosipụta - Usoro ahia
Usoro ahia ahia - Ngosipụta - Usoro ahia
More About Bress Marketing Technology ele ihe
Usoro CycleWave Online Trading
CycleTrader Nchekwa onwe ahia
Trading Akwụkwọ -
Walter Bressert’s – 12 Cardinal ndudue na Trading Futures
Walter Bressert’s – Trading na Control
Isonyere anyị YouTube ọwa ma na-ekiri nza nke bara uru trading videos kwa ọnwa
Gụọ Egwu ngosi tupu ị zụrụ ma ọ bụ mgbazinye bụla nke na ngwaahịa a website.
Zitere anyị Email ozugbo
Ajụjụ? / Comment? / Ngosi? *
Copyright 2016. Bressert Technology trading - Ikike niile echekwabara
Hypothetical arụmọrụ pụta nwere ọtụtụ pụta ụwa na-agaghị emeli, ụfọdụ nke na-kọwara n'okpuru ebe a. Ọ dịghị yiri na-eme ka ahụ ọ bụla na akaụntụ ma ọ bụ yiri iji nweta uru ma ọ bụ na-efunari yiri Iji ndị ahụ e gosiri; N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ugboro nkọ iche N'agbata hypothetical arụmọrụ pụta na-arụpụta n'ezie gasịrị na-enweta site ọ bụla trading usoro. Otu nke-emeli nke hypothetical arụmọrụ pụta bụ na ha na-N'ozuzu kwadebere na abamuru nke ịsị. Ke adianade do, hypothetical trading anaghị agụnye ego n'ihe ize ndụ, ma ọ dighi hypothetical trading ndekọ ike kpamkpam na akaụntụ maka mmetụta Of ego n'ihe ize ndụ nke kpọmkwem trading. Dị ka ihe atụ, ikike Iguzogide Nsogbu tụfuru ma ọ bụ na-ekwenye a akpan akpan trading omume n'Agbanyeghị trading tụfuru bụ ihe onwunwe ihe nke nwekwara ike imetụta n'ezie trading pụta. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ njikọ na ahịa n'ozuzu ma ọ bụ na mmejuputa ọ bụla Specific trading omume nke na a pụghị ime gua na Nkwadebe nke hypothetical arụmọrụ pụta na niile nke pụrụ imetụta erekwa ihe Egwu ngosi: Futures na Forex trading nwere ọkpụrụkpụ n'ihe ize ndụ ma na ọ bụghị nke ọ bụla na ọṅụ. Ihe ọṅụ nwere ike nwere ike ida niile ma ọ bụ karịa na mbụ ego. Egwu isi obodo bụ ego na ike ga-efu enweghị jeopardizing ndị ego ma ọ ndụ style. Naanị ihe ize ndụ isi obodo ga-eji maka trading na naanị ndị na-ezu ihe ize ndụ isi obodo kwesịrị ịtụle trading. Gara aga arụmọrụ idịghe indicative nke ga-eme n'ọdịnihu na-arụpụta. Ngosi: ego na ala na commodities agụnye ọkpụrụkpụ dị ize ndụ ma na-ekwesịghị na-eme n'aghọtaghị niile ize ndụ metụtara ire na zuo nke ala. The cycletrader, profittrader software kọwara n'isiokwu a e mere na-a ngwá ọrụ iji nyere aka investors ke ukeme mkpebi. Ị nwere naanị ọrụ maka eleru na-ekpebi mgbe na ihe okwu ime ihe ọ bụla azụmahịa, na nke na-ekpebi ma ò kwesịrị ekwesị gị nhọrọ. Site etinye na ala ma ọ bụ commodities, ị nwere ike ida gị ego gị niile ego. Gara aga arụmọrụ anaghị ekwe nkwa ido n'ọdịnihu pụta. Ọ bụla trading usoro descibed a na saịtị nwere ike n'ezie anaghị eme gị ego ọ bụla na gị mkpa ịghọta n'ihe ize ndụ e depụtara n'elu.